> Resource> Utility> chezọrọ Gmail Password: Get Ọ Back Ugbu a
"Chefuru m Gmail paswọọdụ na chọrọ iji nweta ya ngwa ngwa!" Enwe otu nsogbu, nri? Echegbula. E nwere ụzọ abụọ n'ihi na ị na-esi gị echefu Gmail paswọọdụ azụ.
1. chezọrọ Gmail paswọọdụ? Google inyere gị aka ịchọta ya azụ
Mbụ, gaa na Gmail akaụntụ nbanye n'ọnụ ụzọ, pịa "nwere ike ịnweta akaụntụ gị?" njikọ dị ka oyiyi n'okpuru.
Nke abụọ, Họrọ nsogbu ị nwere: Echefuru m paswọọdụ. Wee tinye aha njirimara gị iji banye na Google. Nke a nwere ike ịbụ gị Gmail adreesị, ma ọ bụ ọ pụrụ ịbụ ihe ọzọ email adreesị ị metụtara akaụntụ gị. Nke atọ, pịnye captcha ịnọgide. Ikpeazụ nzọụkwụ, ị ga-nwetara atọ nhọrọ na-azụ gị echefu Gmail paswọọdụ: Get a nkwenye koodu on ekwentị gị, na-anata site a ozi ederede ma ọ bụ a ekwentị oku, zaa gị nche ajụjụ, ma ọ bụ na-paswọọdụ nrụpụta njikọ na gị abụọ email.
Weghachite echefu Gmail paswọọdụ na a Gmail paswọọdụ Finder
Ka okpu na-azụ gị forgtten Gmail paswọọdụ site na ukara usoro? Ọ bụghị ọgwụgwụ nke ụwa. Ị ka nwere ike inwe ya azụ a paswọọdụ Finder ngwá ọrụ: Wondershare WinSuite 2012. N'ezie, mgbe ị na nbanye gị Gmail, na akaụntụ ahụ wee paswọọdụ gị e na-akpaghị aka na-echeta na ndekọ na kọmputa gị ma ọ bụ na diski ike. Nke a pụrụ ịtụkwasị obi Gmail paswọọdụ Finder nwere ike inyere ịchọpụta paswọọdụ gị maka gị Gmail na 3 nzọụkwụ, n'agbanyeghị na ị na-eji Windows 7, XP ma ọ bụ ndị ọzọ na Windows ezinụlọ nsụgharị.
Step1. Na-agba ọsọ usoro ihe omume na-aga paswọọdụ / igodo Finder
Mgbe na-usoro ihe omume, wụnye na-agba ya na kọmputa gị, mgbe ahụ gaa paswọọdụ & Key Finder menu n'elu. Ị ga-esi na interface dị ka ndị na. Pịa "Paswọdu Finder" ịchọta gị echefu Gmail paswọọdụ.
Paswọọdụ Finder-enye gị ohere chọta okwuntughe maka Windows Live ID, Outlook, Access Paswọdu, Gmail, Yahoo mail, EC. Họrọ "Gmail / Google Talk Paswọdu", ma kwaga "Ekem".
Step3. Chọta gị forgtton Gmail paswọọdụ
Ekele! Gị echefu Gmail paswọọdụ na-achọta na egosipụta ebe a. Ị nwere ike ide ya ala ma ọ bụ mbupụ ya na kọmputa gị maka Chekwa.
Cheta na: Ọ bụ iwu na-akwadoghị iji naghachi Gmail okwuntughe nke ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị a ikike n'aka onye a. Ngwá ọrụ a na e mere nanị ka a na-eji ndị nwe naghachi ha onwe ha Gmail akụkọ mgbe ha chefuru ọ bụ furu efu ha Gmail paswọọdụ.
Olee otú Idozi Ntldr abịakọrọ Error
Ihe bụ na otú ndozi Register wdg Error